Waa maxay qayb ka mid ah SEO ee ku jira bogga kor u qaadista?
Mawduuca SEO ee website-kobcinta waa su'aal ah meesha fikradda guusha caddaynaysa inay tahay mid muuqda. Uma jeedi doono mabaadi'da Mashruuca Optimization, ama sida loo isticmaalo ficil ahaan. Anigu kumauguma sheegi doono faa'iidooyinka hore loo yaqaan ama faa iido ay u leedahay in la qabto SEO si loo helo ujeedo gudbin bogga. Ka dib, fikradda naqshadihii raadinta ayaa kordhay dhawaanahan, maaddaama ay internetku isbeddelayaan muddo dheer si ay u daboolaan waxyaabo kale oo badan si kor loogu qaado taraafikada webka, iyada oo aaney ku koobnayn liistooyinka raadinta ee dabiiciga ah (organic) - umzugsfirma winterthur.
Sidaa darteed, maxay tahay qaybta ugu weyn ee SEO ee ku jirta bogga kor u qaadista, marka laga reebo kuwa yaryar ee da 'yarta ah? Muxuu yahay SEO ka baxsan oo kaliya qaabeynta website-ka iyo shaqooyinka ugu badan ee bogga ku jira? Aynu wajahno - SEO ee website-kobcinta marwalba marnaba maaha in ay la socoto algorithm search Google. Soo jeedinta dhabta ah waxay tahay in naqshadaynta raadinta ay tahay isku-dhafka sayniska farsamada, fahamka qoto dheer ee ku salaysan, iyo wax yar oo gabay iyo jajab ah. Haa, waxaan ahay halgan halkan. SEO-ka had iyo jeer waxay ku qaylinaysaa hawlaha ugu muhiimsan ee lagu celin karo iyo sida mararka qaarkood loo qoondeeyey, sida:
Samaynta baaritaan macne leh oo muhiim ah mudnaanta saxda ah iyo bilawga maaddo kasta oo ka mid ah bogga boggiisa content.
Falanqaynta tirooyinka raadinta ee muhiimka ah ee muhiimka ah, iyo sidoo kale lagu ogaado bartilmaameedyada hoose ee mowduucyada ku xeeran.
Qaadashada tirooyinka raadinta ee ereyada muhiimka ah ee isku xirka tartankooda si loo bilaabo isticmaalka kuwa ugu xooggan oo si fiican isugu dheellitiran oo keliya.
Oo halkan waxaan ugu dambayntii ku soo galeynaa meel aad u jilicsan oo xitaa khatarta ugu jirta SEO iyo website. Waxaan u jeedaa in halkan ka bilowdo sixirka iyo gabayada hufnaanta raadinta hal abuurka iyo waxsoosaar leh. Dhamaan oo ah barnaamijka SEO waa in lagu hogaamiyaa fikradaha asalka ah iyo fekerka ah ee loo qaabeeyey kiis kasta si loo gaaro waxqabadkii ugu sareeyay ee bogga internetka. Aan ku tuso qaybta dhabta ah ee SEO-ga oo leh dhawr tusaalooyin hoos ku qoran:
Inaad si buuxda u isticmaashid qaar ka mid ah arrimahan, oo runtii ah mid aad u ballaadhan, hase yeeshee, ee luminta horumarkii hore. Ma tahay xaqaa? Adiga oo keliya.
Qaadashada badi go'aamada la qaaday ee isku dheelitirka saxda ah ee u dhexeeya faham balaadhan oo dhexdhexaad ah iyo qeyb adag oo ah aqoonta la helay. Ma jirto qaab xisaabeed oo SEO ah, xitaa ku saabsan tirakoobka qabowga iyo cabirrada boggaga caadiga ah. Go'aam kasta oo si wanaagsan loo sameeyay ayaa halkan laga helayaa iyada oo aragtida aragtida ah ee xogta guud ee dadweynaha laga soo ururiyey ilo kala duwan.
Ku shaqeynaya sida quruxda dhabta ah, joogto ah oo taxadar leh qof kasta, xitaa dhibta, faahfaahin. Waxaa badanaa lagu magacaabaa in shaqo kasta oo maalin kasta ah ay noqoto fikrad dhiirranaan ah oo lagu dhiso wax aad u fiican, u bixiya adeegyadda ugu wanaagsan, oo leh khibrad sare oo khuseeya warshad gaar ah, iyada oo daacad u ah tartan cadaalad ah isla waqti isku mid ah.
Dhinaca kale ee dheeraadka ah ee SEO iyo website-kooda, waxaa jira nidaamyo sharci-darro ah oo lagu hago ama lagu hagaajiyo algorithm search. Ka dib, waxan ku weydiin karaa hal su'aal kaliya - waa wax kasta oo degdeg ah, laakiin wakhti gaaban oo guulo ah oo ku saabsan qiimeynta qiimaha leh ee leh websaydh oo leh mustaqbal aan la hubin? Intii aad u wareegi lahayd habka halista iyo natiijooyinka cakiran ee suurtogalka ah, waxaan ku talineynaa in lagu dadaalo dhammaan dadaalka "asluub" iyo asal. Sababtoo ah dhamaanteen waxaan dooneynaa inaan helno bog internet ah oo muujinaya natiijooyinka raadinta ugu sareysa 10-aad sida ay u qalanto.